Ixesha eliphakathi kwemisonto, ubomi obudlamkileyo bukaSira Quiroga | Uncwadi lwangoku
Ixesha phakathi kwemisonto (2009) yinoveli ngumbhali waseSpain uMaría Dueñas. Libali eliyilwe kakuhle malunga nobomi obudlamkileyo bukaSira Quiroga, umthungi oselula oshiye iMadrid kwiinyanga ezimbalwa phambi kweMfazwe yamakhaya. Okwangoku, kumfundi, indlela yombhali yokubeka imeko ebalulekileyo kwimbali yaseSpain naseYurophu iyatyhila.
Ngesi sizathu, le ncwadi inexabiso elingenakuphikiswa njengobungqina belo xesha (ngaphandle kwempumlo eliyihambisayo). Lilonke, iyelenqe lothando nentlungu, kunye nenkcazo yenyani yelo xesha ngokolandelelwano olutyebileyo nolunomdla, yenze omnye wemisebenzi ebalaseleyo ebhalwe ngolwimi lweSpanish kwewaka leminyaka.
1 Isishwankathelo sexesha eliphakathi kwamaSeams
1.2 Ukuvuka kwakhona
2 Uhlalutyo malunga nexesha phakathi kwemisonto
2.1 Inoveli ethembekileyo yembali
2.2 Umxholo obalulekileyo kwinoveli
2.3 Uhlengahlengiso kumabonakude
3 Malunga nombhali, uMaría Dueñas
3.1 Impembelelo yeXesha phakathi kwamaSeams
3.2 Ezinye iincwadi zikaMaría Dueñas
Isishwankathelo se Ixesha phakathi kwemisonto
USira Quiroga ngumthungi oselula nonomtsalane owafumana ilifa elibalulekileyo kuyise, ocebisa kabukhali ukuba abaleke eSpain. Ukuphela kweminyaka engama-30, ngobusuku beMfazwe yamakhaya, uSira uluva ubundlobongela kwindalo esingqongileyo. Ukongeza, intombazana encinci iyathandana noRamiro, nangona ethatha isigqibo sokufudukela kwikomkhulu laseMorocco.
Ngenxa yezizathu ezichaziweyo, intombi iya eTangier ilandela umendo wesithandwa sayo. Nangona kunjalo, ukubala kwabo akuzange kubonakale ngaphambi kokuqamba, inkohliso kunye nobubi kwicala likaRamiro. Ngenxa yoko, uSira uzibona sele eshiywe kuMntla Ntshona Afrika kwaye waphangwa yile ndoda ingathandekiyo (kunye netyala).
USira uyakwazi ukoyisa ngaphandle kweemeko ezinzima; Uthatha isigqibo sokuphinda aqalise urhwebo lwakhe njengomthungi ukuze aphile, kwaye ade abuye athandane kwakhona. Ngale ndlela, yena Uba ngumhlobo wabathengi abaliqela… Obo buhlobo butsha bunxulumene nezopolitiko phakathi kwemeko enje ngemfazwe yobukhulu obukhulukazi bonakalisa ukujika kwezinto.
Emva kwexesha, uSira Quiroga uthatha isigqibo sokusebenza njengempimpi yemikhosi emanyeneyo kwaye uthatha inxaxheba ngendlela ebalulekileyo kwimisitho yeMfazwe yesibini (II) yeHlabathi. Nangona esiphelweni sebali kuyacaca ukuba umlinganiswa ophambili ufuna ukuhlala ngoxolo, isiphithiphithi esithe xhaxhe kuye silindele ukufika kwakhe. Nangona kunjalo, ezi ziganeko zichazwe apha Sira, icandelo lesibini le Ixesha phakathi kwemisonto (Ikhutshwe ngo-Epreli 2021).
Uhlalutyo kwi Ixesha phakathi kwemisonto
Inoveli ethembekileyo yembali
Kule ncwadi, umbhali uthathela ingqalelo Iprojekthi enobungangamsha yoncwadi, engenakho ukubalwa kancinci kwizalathiso zembali ezicingelwayo. Ngenxa yoko, ukubandakanywa kwabalinganiswa bokwenyani kunye neziganeko ezenzeka kwiminyaka ye-30 eSpain zibalulekile kwingxelo.
Ukongeza koku -kunye namava ophambili-, U-Dueñas ucacisa ngobuchule umxholo weMfazwe yesibini yeHlabathi. Ngenxa yoku, umbhali usebenzisa iinkcazo kunye nezalathiso ezibonisa umbono wakhe malunga nemfazwe ebaluleke kakhulu kwimbali yoluntu. Apho injongo ikukugcina intlekele yemfazwe ifihliwe kwimemori yomfundi.
Umxholo obalulekileyo kwinoveli
Ngokucacileyo, xa ujongene nenoveli yezembali, akunakwenzeka ukuba unganiki ukubaluleka okubalulekileyo kwimeko apho iziganeko zibaliswa khona. Ke ngoko, Ixesha phakathi kwemisonto igcina umfundi elandela ubomi bukaSira Quiroga, ngelixa ebonisa umbono wemfazwe. Ngamanye amagama, umxholo wemfazwe kwimeko yomntu uqhuba kulo lonke ibali.
Ngaphezu koko, umlinganiswa ophambili-phantsi kwegama lekhowudi u-Arish Agoriuq-uba sisiqwenga esingumlingisi sesiNgesi ngexesha leMfazwe yesibini (II) yeHlabathi. Ngaxeshanye, Imiba enzima yemfazwe iyavezwa edlula kwintlekele engenakuphepheka. Ukongeza, indlela eya kwiMfazwe yaseKhaya yaseSpain icacisa ukuba imeko yezentlalo yabakho njani ngenxa yongquzulwano.
Ukwamkelwa koluntu ngokugqwesileyo kunye ne-barrage yokuphononongwa okuhle kukhokelele Ixesha phakathi kwemisonto Yaziswa kwiscreen esincinci. Ngesi sizathu, Ngo-2013, isikhululo sikamabonwakude i-Antena 3 sarekhoda uthotho lwegama elifanayo elineziqendu ezili-17 ukuza kuthi ga ngoku. kwaye uqokelele amabhaso amaninzi.
Kwakhona, Olu luhlu lunabalingisi bamazwe aphesheya abakhokelwa ngabadlali beqonga lika-Adriana Ugarte, UPeter Víves noHanna New, phakathi kwabanye. Isiqendu ngasinye soluhlu sithathe uhlahlo-lwabiwo mali olulinganiselweyo lwesiqingatha sesigidi se-euro, ikakhulu ngenxa yeseto sexesha kunye nesinxibo.
Ngayiphi na imeko, ibiyimali esetyenziswe kakuhle kakhulu, kuba amanqanaba ababukeli bexesha lokuqala engazange awehle angaphantsi kwe-11%. Quka, Isiqendu seshumi elinanye, "Buyela izolo", sibonwe ngababukeli abazizigidi ezi-5,5 (27,8% ivulwe ngoJanuwari 20, 2014).
Ekugqibeleni, ngokusungulwa kwe Sira (2021) UMaría Dueñas uvule ucango lokusiwa ngakumbi esineenkwenkwezi uSira Quiroga -Arish Agoriuq. Ngenxa yokuthandwa kunye neenombolo zorhwebo ezifunyenwe kwiscreen esincinci, abaphulaphuli abathetha iSpanish abanakothuka xa kuvela iziqendu ezitsha zoluhlu.
Malunga nombhali, uMaría Dueñas
Ungutitshala kunye nombhali waseSpain owazalwa ngo-1964, ePuertollano, kwiphondo laseCiudad Real, eSpain. Ngaphambi kokuqala umsebenzi wakho wokubhala, Abanini Wenza ubomi bokufunda ngaphezulu kweminyaka engamashumi amabini kwiDyunivesithi yaseMurcia. Kwangokunjalo, umfazi wasePuerto Rican unesidanga sobugqirha kwi-Philology yesiNgesi kwaye unemisebenzi eyaziwayo yenkcubeko kunye nophando kwilizwe lase-Iberia.
Okwangoku, uMaría Dueñas uhlala eCagagagena, utshatile unjingalwazi waseyunivesithi kwaye unabantwana ababini. Ngaxeshanye, Iqaqambisa umsebenzi wobukrelekrele oweza nokupapashwa kwinoveli yakhe yokuqala ngo-2009: Ixesha phakathi kwemisonto. Ngenxa yoku, yaduma kulo lonke elaseYurophu nakwinxalenye yehlabathi liphela.
Impembelelo Ixesha phakathi kwemisonto
Le noveli yaba lupapasho oluthengisa kakhulu, lwaguqulelwa phantse kwiilwimi ezingamashumi amane lwaza lwajika lwaba ngumdlalo kamabonakude lijelo leAntena 3. Ngendlela efanayo, enkosi kwesi sihloko u-Dueñas wafumana imihombiso eliqela. Phakathi kwabo, isiXeko saseCagagagena Ibhaso leeNoveli zeMbali (2010) kunye neNkcubeko ngeBhaso leNkcubeko 2011 (udidi loncwadi) lweSixeko saseMadrid.
Emva kweminyaka elishumi elinambini yokupapashwa, Ixesha phakathi kwemisonto iqokelela intengiso engaphezulu kwezigidi ezintlanu kwilizwe jikelele. Kodwa, ngokungathi ayonelanga, inoveli ipapashwe ubuncinci amaxesha asixhenxe kwiYurophu iphela nakwezinye iindawo emhlabeni.
Ezinye iincwadi zikaMaría Dueñas
Ukuthandwa kwe Ixesha phakathi kwemisonto isetyenziswe ngumbhali waseSpain ukukhuthaza ukupapashwa kwakhe okulandelayo. Kaninzi, ngokungathandabuzekiyo, Umbono ulibale (2012) Ubushushu (2015) kunye Iintombi zikaKapteni (2018)Banomtsalane wabo othile kwaye bayilwe kakuhle. Inyaniso, Umbono ulibale y Ubushushu zikhutshelwe umabonakude.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » iintlobo » Inoveli » Ixesha phakathi kwemisonto
Inoveli endinomdla kakhulu!
Enkosi ngesishwankathelo esihle kunye nohlalutyo!